के मेसी र रोनाल्डो युग सकिँदै छ ?
लन्डन – इमलेन बेग्लीयुरोपेली फुटबलले सातौं सिजन छुँदा लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एकआपसमा आफ्नो क्लबका लागि तीन गोल मात्र गरेका छन् ।
मेसी र रोनाल्डोको जोडी त्यही हो, जसले पछिल्लो एक दशकको विश्व फुटबलमा एकछत्र राज गरेको छ । उनीहरूले एक आपसमा १ हजार ३ सय ६९ गोल गरेका छन् ।
अनि एकआपसमा १० पल्ट बेलन डे’अर जितेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले संयुक्त रूपमा नौ पल्ट च्याम्पियन्स लिग पनि जितेका छन् ।
मेसी अहिले ३२ वर्षका भए र उनले बार्सिलोनाका लागि पहिले जस्तो खेल्न सकिरहेका छैनन् । यसका प्रमुख कारण उनले बोकिरहेको धेरै थरीको चोट नै हो । अनि युभेन्ट्सका पोर्चुगाली स्टार ३४ वर्षका भए । अचेल उनी पनि सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधिका लागि प्रत्यासी हुन छाडेका छन् । के यो सबैले देखाउँछ त, विश्वफुटबलमा मेसी र रोनाल्डोको युग सकिँदै छ भनेर ? के विश्वकप फुटबलमा उनीहरूले कायम गरेको आधित्प अब पातलिँदै छ त ?
केही पनि स्थायी हुन्न । सन् २००५–०६ यता मेसी र रोनाल्डोले एक आपसमा मिलाएर पनि सबैभन्दा कम गोल गरेका छन्, सेप्टेम्बर ३० सम्मलाई आधार मान्दा । गत सिजन ११ वर्षयता पहिलो पल्ट उनीहरूले बेलन डे’अर पनि जित्न सकेनन् । भलै मेसीको भागमा पर्‍यो, फिफा वर्ष खेलाडीको उपाधि । सन् २०१०–११ यता मेसीले सबै खाले प्रतियोगितामा ४ सय ७६ खेल खेलेका छन् । युरोपका प्रमुख पाँच लिगमा कसैले पनि यति धेरै खेले खेलेका छैनन् ।
यो मामिलामा रोनाल्डो तेस्रोमा पर्छ, ४ सय ५२ खेलसहित । तर यही मेसीले यसपल्टका सिजनका सात ला लिगा खेलमा सबै जोडेर जम्माजम्मी ९० मिनेट मात्र खेलेका छन् । उनलाई चोटले खुबै सताइरहेको छ । इन्टर मिलानविरुद्ध युरोपेली च्याम्पियन्स लिग खेलमा भने उनी फर्के । मेसीलाई आफ्नो पूरा खेल जीवनमा चोटले बारम्बार सताएको छ । उनीले केवल एकै सिजन मात्र यस्तो बिताएका छन्, जसमा चोटको समस्या रहेन् ।
अब मेसी लिगमा सबै बाँकी ३१ खेल खेल्ने हो भने उनले सन् २०१३–१४ यता सबैभन्दा कम लि खेल खेल्नेछन् । अबको केही लिग खेल गुमाउने हो भने उनले सन् २००७–०८ यता पहिलो पल्ट सबैभन्दा कम खेल्नेछन्, लिगमा । यी सबैका बावजुत पनि गत सिजन उनका लागि राम्रै रह्यो, उनले ५० खेलमा ५१ गोल गरे । त्यसैले पनि उनले फिफाको उत्कृष्ट अवार्ड पाएका हुन् । तर १ सय २० मिनेटमा अहिलेसम्म कुनै गोल गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय भने हुन सक्छ, मेसीका समर्थकका लागि ।
गत सिजन रोनाल्डोले पनि चोटका कारण धेरै खेल्न सकेनन् र यो सन् २०१४–१५ यता सबैभन्दा कम रह्यो । गोलको संख्यामा पनि उनी गत सिजन धेरै पछाडि परे । त्यस सिजन उनले ४३ खेलमा २८ गोल गरे । अरू खेलाडीको प्रसङ्ग थियो भने पनि यो उत्कृष्ट मानिन्थ्यो, तर रोनाल्डो जत्तिको खेलाडीका लागि यो पक्कै पर्याप्त होइन । तर यो पनि उनले म्यानचेस्टर युनाइटेड छाडेर रियल म्याड्रिड आएयता सबैभन्दा कम हो ।
फेरि सन् २०११–१२ यता पहिलो पल्ट मेसी अथवा रोनाल्डोमध्ये कसैले पनि युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जित्न सकेन् । गत सिजनको सिरी ए मा उनले सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीको चौथो स्थानमा रहे । उनको अगाडि रहे, साम्पडोरियाका फाबियो क्वागिरेला । तर रोनाल्डोको खेलमा कमी आउन थालेपनि विश्वास गर्न सकिन्छ, उनले अझै धेरै गोल गरेका छन् । यसको राम्रो उदाहरण त उनले पोर्चुगल र युभेन्ट्सका लागि खेलका पछिल्ला खेलमा देखाइसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।